Ogaden News Agency (ONA) – Qaxooti cusub oo soo gadhay Xeryaha qaxootiga oo ka hadlay dhibatada Liyu Poliska daawo Filimkan KBC TV
Qaxooti cusub oo soo gadhay Xeryaha qaxootiga oo ka hadlay dhibatada Liyu Poliska daawo Filimkan KBC TV
Posted by ONA Admin	/ June 20, 2012
TV-ga KBC ee laga leeyahay wadanka Kenya ayaa waxa uu soo saaray sawiro aad u naxdin badan kadib markii uu wareysiyo kasoo qaaday dad cusub oo kasoo qaxay dhulka Ogadeniya oo soo gaadhay xeryaha qaxootiga kenya ee IFO kuwaas oo magan galyada ku yimid wadanka Kenya.
KBC waxay xerada Ifo kasoo dubeen filimaan naxdin badan oo haween iyo dad dhibanayaal ah oo dhawacyo kufsi iyo dilal kasoo gaadheen ciidamada Gumeysiga Ethiopia iyo kuwa falaagada Liyuu Poliska ee gumeysigu ku adeegto.
TVga ayaa sheegay in shacabka somalida Ogadneiya ay dhibaato iyo xasuuq ba’an kala kulmaan ciidamada falaagada liyuu poliska iyo kuwa dowlada ee woyanaha ah.
hooyadan oo kamid aheyd dadkii lawareystay ayaa dhibaatoyinki kasoo gaadhay ciidmada woyanaha iyo kuwa liyuu poliska markay ka waramaysay aad u damqatay oo xasuus iyo tiiranyo la ilmeysay, waxayna u sheegtay TV-ga in dhibaatada loo geystay ay uga sii daran tahay inaysan jirin wax cid ah oo u arxameysa iyada iyo dadka lamidka ah ee Ogadeniya gumeysigu kuwaxyeeleeyo. Caalamkuna uma gurmanayo dhibatadaas ka jirta Ogadeniya.
Gabadh da’ayar ayaa ka warbixisay in Aabaheed ay ciidamada gumeysigu kaxeysteen kadibna ay dileen oo muddo isaga oo meyd ah ay heysteen loona diiday in la aaso.
Qaxootigan soo gaadhay xeryaha qaxootiga Kenya ayaa waxa ka muuqda jidh dil iyo dhaawacyo halis ah oo jidhkooda ka muuqda. Waxaana kamid ah haweenay luqunteeda dhaawacyo aad halis u ah nabaradoodi ka muuqdaan.
dhibaatada baaxadaas le’eg ee dilka, xasuuqa, kufsiga iyo hantida maaliyeed ee la burburiyay ee ciidamada Gumeysigu u geysanayo shacabka somalida Ogadeniya ayaa maalin kasta soo kordhaysa. Dadkaas dhibatadu kasoo gaadho gumeysiga oo loo diido inay xuduudaha kasoo gudbaan ayaa hadana tiro aad u badan oo qaxooti ah waxay soo gaadheen sanadihii u danbeysay xeryaha qaxootiga ee Kenya.
Filimka laga soo duubay qaxootiga Ogadenya ee TV-ga Kenya laga daawaday, ayaan soo galin doonaa ee la socda.